उद्यमशीलता Archives - SYMNetwork
२०७८ मंसिर २७, सोमबार २०:५९२०७८ मंसिर २७, सोमबार २०:५९२०७८ मंसिर २७, सोमबार २०:५९ by Senior Editor NimaNo Comments
निखिल सापकोटा आइटीका विद्यार्थी हुन्। २५ वर्षीय उनलाई सानैदेखि कम्प्युटरमा काम गर्ने रहर थियो। त्यतिबेला वेब-डिजाइन क्षेत्र बिस्तारै उदाउँदै थियो र यो काममा धेरै मान्छे संलग्न थिएनन्। निखिल अमेरिकाका ठूला सूचना-प्रविधि कम्पनीमा काम गर्ने सपना देख्थे। सपना साकार पार्न वेब-डिजाइनिङबारे घरमै अध्ययन गर्न थाले। केही काम सिके पनि। उनी १४ वर्षकै हुँदा पाकिस्तानको एउटा टेलिकम कम्पनीमा जागिरका लागि आवेदन दिए। निखिलका अनुसार उनले जागिर पनि पाए। त्योबेलै दस हजार तलबमा। त्यसलगत्तै उनले अन्य थुप्रै विदेशी कम्पनीमा वेब-डिजाइनरका रूपमा काम गर्न थाले। Advertisement लामो समय एउटै क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनको मनले भने नयाँ काम खोजिरहेको थियो। राम्रो विदेशी कम्पनीमा राम्रै तलब खाइरहँदा पनि उनलाई सधैं अर्काका लागि काम गर्...
२०७८ मंसिर २७, सोमबार २०:२३२०७८ मंसिर २७, सोमबार २०:२३२०७८ मंसिर २७, सोमबार २०:२३ by Senior Editor NimaNo Comments
ओ माई ह्यान्डमेडकी सञ्चालक सुष्मा कार्की। नयाँ बानेश्वरको एउटा सानो पसलले हरेक बटुवाको ध्यान तान्छ। यहाँ चित्रकलाले भरिएका स-साना क्यानभास, मोबाइलका खोल, टोट ब्याग (झोला) र सिरानीका खोलहरू राखिएको छ। योसँगै केही कप र घरभित्र राखिने बिरूवाहरूले पसल सजिएको छ। सानो भए पनि पसलको सजावट लोभलाग्दो छ। पसलको नाम हो 'ओ माई ह्यान्डमेड'। ओ माई ह्यान्डमेड यस्तै चिटिक्क परेका, हातैले बनाइएको सामग्रीहरू पाइने थलो हो। पसल एवम् यो व्यवसायका सञ्चालक हन् २४ वर्षीया सुष्मा कार्की। Advertisement पसल चलाउने मात्रै होइन, ओ माई ह्यान्डमेडमा उपलब्ध हरेक सामान सुष्मा आफैं बनाउँछिन्। विगत सात वर्षदेखि सञ्चालित ‌ओ माई ह्यान्डमेडको यो पसल भने गत भदौमा मात्र खुलेको हो। 'पहिले ओ माई ह्यान्डमेड अनलाइनमा मात्र केन्द्रित थियो। ग्राहकसँग सोधपुछ गर्दा धेरैको प...
२०७८ मंसिर २, बिहीबार २०:२६२०७८ मंसिर २, बिहीबार २०:२६२०७८ मंसिर २, बिहीबार २०:२६ by Senior Editor NimaNo Comments
धेरैले भनेको सुनेका छौं- चकलेट त विदेशी मात्र मिठो! हुन पनि गुणस्तरीय चकलेट किन्न जानुभयो भने विदेशी ब्रान्डकै पाइन्छन्। भलै यहाँ पाइने स्वाद केही फरक होस्, संसारभर चर्चित ब्रान्ड त हुन् नि! तर तपाईंलाई थाहा छ कि छैन, नेपालमै पनि उत्तिकै राम्रा र स्वादिला चकलेट बन्छन्। स्वदेशी ब्रान्डका चकलेट बजारमा छ्यासछ्यास्ती नहोलान्, चाहनुभयो भने पक्कै पाउनुहुनेछ। यस्तैमध्ये आज हामी कुरा गर्दैछौं नेपाली चकलेट ब्रान्ड 'येजु'को। येजु २४ वर्षीय सौरभमणि शाक्य र २१ वर्षीया सलोनीदेवी शाक्यको मेहनतको उपज हो। सलोनीदेवी शाक्य र सौरभमणि शाक्य यो ब्रान्डअन्तर्गत मार्समेलो ह्वाइट, ब्लुबेरी, रास्पबेरी, क्र्यानबेरी, डार्क, लगायत गरी २२ स्वादका चकलेट पाइन्छ। भेगन चकलेट र धेरै गुलियो मननपर्ने तथा मधुमेह भएका व्यक्तिका लागि ५०, ६० र ७० प्रतिशत कोकोआ&nb...